Translations < Myanmar (Burmese) < Administration < GlotPress — WordPress
Translation of Administration: Myanmar (Burmese)
← 1234… 165 →
Filter ↓ • Sort ↓ • All (2,469) • Untranslated (424) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (1)
Deactivate removing-widget လုပ်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းရန်	 Details
2014-09-04 20:11:17 GMT
Available Widgets ရ​ရှိ​နိုင်​သော​ ဝစ်ဂျက်များ	 Details
2014-09-04 20:11:27 GMT
Error in displaying the widget settings form. ဝစ်ဂျက်သတ်မှတ်ချက် ဖြည့်​စွတ် ပုံစံကို ပြသ​နေစဉ် အမှား​	 Details
ဝစ်ဂျက်သတ်မှတ်ချက် ဖြည့်​စွတ် ပုံစံကို ပြသ​နေစဉ် အမှား​
Save Widget ဝစ်ဂျက်ကို​သိမ်း​ပါ	 Details
2011-03-18 09:03:37 GMT
Select both the sidebar for this widget and the position of the widget in that sidebar. ဒီ ဝစ်ဂျက်အတွက် ​ဘေး​တန်း​ နှစ်ခုစလုံး​နဲ့​ ထို ​ဘေး​တန်း​ထဲမှာ ဝစ်ဂျက်တည်​နေရာကို ​ရွေး​ချယ်ပါ။	 Details
ဒီ ဝစ်ဂျက်အတွက် ​ဘေး​တန်း​ နှစ်ခုစလုံး​နဲ့​ ထို ​ဘေး​တန်း​ထဲမှာ ဝစ်ဂျက်တည်​နေရာကို ​ရွေး​ချယ်ပါ။
Widget %s ဝစ်ဂျက်များ %s	 Details
2011-03-18 09:03:36 GMT
Drag widgets here to remove them from the sidebar but keep their settings. ဝစ်ဂျက်များကို ​ဘေးဘားမှ ဖယ်ရှားပြီး ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ထိမ်းသိမ်းထားရန် ဒီ​နေရာသို့ ဆွဲချထားပါ​။	 Details
ဝစ်ဂျက်များကို ​ဘေးဘားမှ ဖယ်ရှားပြီး ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ထိမ်းသိမ်းထားရန် ဒီ​နေရာသို့ ဆွဲချထားပါ​။
Inactive Widgets အသက်မဝင်သော ဝစ်ဂျက်​များ	 Details
This sidebar is no longer available and does not show anywhere on your site. Remove each of the widgets below to fully remove this inactive sidebar. ဒီ​ဘေးဘားတန်းကို မရရှိနိုင်​တော့ပါ​။ သင့်ဆိုဒ်မည်သည့်​နေရာတွင်မှ ​ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ​။ ​အောက်တွင်ရှိ​သော ဝစ်ဂျစ်တစ်ခုစီကို ဖယ်ရှားပြီး ဒီသက်ဝင်မှုမရှိ​သော ​ဘေးဘားတန်းကို အပြည့်အဝ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ​။	 Details
ဒီ​ဘေးဘားတန်းကို မရရှိနိုင်​တော့ပါ​။ သင့်ဆိုဒ်မည်သည့်​နေရာတွင်မှ ​ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ​။ ​အောက်တွင်ရှိ​သော ဝစ်ဂျစ်တစ်ခုစီကို ဖယ်ရှားပြီး ဒီသက်ဝင်မှုမရှိ​သော ​ဘေးဘားတန်းကို အပြည့်အဝ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ​။
2014-09-04 20:11:14 GMT
Inactive Sidebar (not used) သက်ဝင်မှုမရှိ​သော​​ဘေးဘားတန်း (အသုံးမပြု)	 Details
The theme you are currently using isn&#8217;t widget-aware, meaning that it has no sidebars that you are able to change. For information on making your theme widget-aware, please <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">follow these instructions</a>. လတ်တ​လော သင် သုံး​စွဲ​နေတဲ့​ အခင်း​အကျင်း​များ​ဟာ ဝစ်ဂျက်ကို သိရှိခြင်း မရှိပါ၊​ ဆိုလိုတာက ၎င်းမှာ သင် ​ပြောင်း​လဲနိုင်တဲ့​ ​ဘေး​တန်း​များ​ မရှိပါ။ သင့်​ရဲ့​ အခင်း​အကျင်း​ကို ဝစ်ဂျက်သိရှိသော အခင်းအကျင်း ပြုလုပ်ရန် အချက်အလက်အတွက်၊​ <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">ဒီညွှန်ကြား​ချက်များ​ကို လိုက်နာပါ</a>။	 Details
လတ်တ​လော သင် သုံး​စွဲ​နေတဲ့​ အခင်း​အကျင်း​များ​ဟာ ဝစ်ဂျက်ကို သိရှိခြင်း မရှိပါ၊​ ဆိုလိုတာက ၎င်းမှာ သင် ​ပြောင်း​လဲနိုင်တဲ့​ ​ဘေး​တန်း​များ​ မရှိပါ။ သင့်​ရဲ့​ အခင်း​အကျင်း​ကို ဝစ်ဂျက်သိရှိသော အခင်းအကျင်း ပြုလုပ်ရန် အချက်အလက်အတွက်၊​ <a href="https://codex.wordpress.org/Widgetizing_Themes">ဒီညွှန်ကြား​ချက်များ​ကို လိုက်နာပါ</a>။
2015-04-12 21:13:26 GMT
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen" target="_blank">Documentation on Widgets</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen" target="_blank">ဝစ်ဂျက်များဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်း</a>	 Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Appearance_Widgets_Screen" target="_blank">ဝစ်ဂျက်များဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်း</a>
2015-04-12 21:18:39 GMT
When changing themes, there is often some variation in the number and setup of widget areas/sidebars and sometimes these conflicts make the transitionabit less smooth. If you changed themes and seem to be missing widgets, scroll down on this screen to the Inactive Widgets area, where all of your widgets and their settings will have been saved. အခင်းအကျင်းပြောင်းသောအခါ ဝစ်ဂျက်ဧရိယာနှင့် ဘေးဘားများ အရေအတွက် အပြောင်းအလဲရှိတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဤပြဿနာသည် အခင်းအကျင်းပြောင်းလဲမှုကို အနည်းငယ် မချော့မမွေ့ဖြစ်စေပါသည်။ အခင်းအကျင်းပြောင်းပြီးသောအခါ ဝစ်ဂျက်များပျောက်နေပါက ဤဖန်သားပြင်အောက်ဘက်ရှိ သက်ဝင်မှုမရှိသော ဝစ်ဂျက်များ ဧရိယာကို လျှောဆင်းလိုက်ပါ။ သင့်ဝစ်ဂျက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို သိမ်းဆည်းပေးထားပါသည်။	 Details
အခင်းအကျင်းပြောင်းသောအခါ ဝစ်ဂျက်ဧရိယာနှင့် ဘေးဘားများ အရေအတွက် အပြောင်းအလဲရှိတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဤပြဿနာသည် အခင်းအကျင်းပြောင်းလဲမှုကို အနည်းငယ် မချော့မမွေ့ဖြစ်စေပါသည်။ အခင်းအကျင်းပြောင်းပြီးသောအခါ ဝစ်ဂျက်များပျောက်နေပါက ဤဖန်သားပြင်အောက်ဘက်ရှိ သက်ဝင်မှုမရှိသော ဝစ်ဂျက်များ ဧရိယာကို လျှောဆင်းလိုက်ပါ။ သင့်ဝစ်ဂျက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို သိမ်းဆည်းပေးထားပါသည်။
2014-09-04 20:11:08 GMT
Many themes show some sidebar widgets by default until you edit your sidebars, but they are not automatically displayed in your sidebar management tool. After you make your first widget change, you can re-add the default widgets by adding them from the Available Widgets area. အခင်းအကျင်းအများအပြားမှ ဘေးဘားဝစ်ဂျက်အချို့ကို သင့်ဘေးဘားများကို ပြုပြင်မှုမပြုလုပ်မှီအထိ မူလအခြအေနေတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို သင့် ဘေးဘား စီမံခန့်ခွဲမှု ကိရိယာတွင် အလိုလို ဖော်ပြမထားပါ။ ပထမဆုံး ဝစ်ဂျက်ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီပါက၊ ရနိုင်သော ဝစ်ဂျက် ဧရိယာမှ ၎င်းတို့ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် မူလာ ဝစ်ဂျက်များကိ ုပြန်ထည့်နိုင်သည်။	 Details
အခင်းအကျင်းအများအပြားမှ ဘေးဘားဝစ်ဂျက်အချို့ကို သင့်ဘေးဘားများကို ပြုပြင်မှုမပြုလုပ်မှီအထိ မူလအခြအေနေတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို သင့် ဘေးဘား စီမံခန့်ခွဲမှု ကိရိယာတွင် အလိုလို ဖော်ပြမထားပါ။ ပထမဆုံး ဝစ်ဂျက်ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီပါက၊ ရနိုင်သော ဝစ်ဂျက် ဧရိယာမှ ၎င်းတို့ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် မူလာ ဝစ်ဂျက်များကိ ုပြန်ထည့်နိုင်သည်။
2014-09-04 20:11:19 GMT
Missing Widgets ​ပျောက်ဆုံး​နေ​သော ဝစ်ဂျက်များ	 Details